मंसिरबाट ए डिभिजन लीग, कति टिमले जनाउँदै छन् सहभागिता ? - Everest Dainik - News from Nepal
मंसिरबाट ए डिभिजन लीग, कति टिमले जनाउँदै छन् सहभागिता ?
काठमाडौं, जेठ १८ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले सहिद स्मारक ए डिभिजन लीग मंसिरबाट गर्ने निर्णय गरेको छ। एन्फाको शुक्रबार भएको केन्द्रिय समितिको बैठकले आगामी १२ मंसिरदेखि ए डिभिजन लिग गर्ने निर्णय गरेको हो। एन्फाले जिल्ला लीगबाट छनोट हुने ७ टिमबीच प्रेसिडेण्ट कप गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
याे पनि पढ्नुस अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको चुनाव स्थगितबारे एएफसीको चासाे, काठमाडौं आउँदै टाेली
प्रेसिडेन्ट कपको मिति टुंगो लागेको छैन्। प्रेसिडेन्ट कपमा ७ प्रदेशका ७ टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रेसिडेन्ट कपपछि एन्फाले राष्ट्रिय लीग गर्ने निर्णय गरेको महासचिव इन्द्रमान तलधारले जानकारी दिए। राष्ट्रिय लिगमा प्रेसिडेन्ट कपका उत्कृष्ट ४ टिम र ए डिभिजन लिगका उत्कृष्ट ६ टिम गरी १० टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
याे पनि पढ्नुस जापानी सरकारले एन्फालाई सहयोग
एन्फाले जुनमा सञ्चालन हुने फिफा कंग्रेसको बैठकमा नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का र सदस्य पेमा डोल्मा लामालाई पठाउने निर्णय गरेको छ। एन्फाले जिल्ला लिगसहित विभिन्न प्रतियोगिताका लागि संयोजकहरुपनि तोकेको छ।